Obscurebay စျေး - အွန်လိုင်း OBS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Obscurebay (OBS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Obscurebay (OBS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Obscurebay ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Obscurebay တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Obscurebay များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ObscurebayOBS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.417ObscurebayOBS သို့ ယူရိုEUR€0.354ObscurebayOBS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.319ObscurebayOBS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.38ObscurebayOBS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr3.72ObscurebayOBS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.2.63ObscurebayOBS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč9.24ObscurebayOBS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł1.55ObscurebayOBS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.552ObscurebayOBS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.584ObscurebayOBS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$9.27ObscurebayOBS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$3.23ObscurebayOBS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$2.24ObscurebayOBS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹31.25ObscurebayOBS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.70.47ObscurebayOBS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.573ObscurebayOBS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.638ObscurebayOBS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿12.98ObscurebayOBS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥2.9ObscurebayOBS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥44.55ObscurebayOBS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩494.57ObscurebayOBS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦161.71ObscurebayOBS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽30.58ObscurebayOBS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴11.47
ObscurebayOBS သို့ BitcoinBTC0.00004 ObscurebayOBS သို့ EthereumETH0.00109 ObscurebayOBS သို့ LitecoinLTC0.00768 ObscurebayOBS သို့ DigitalCashDASH0.0046 ObscurebayOBS သို့ MoneroXMR0.00469 ObscurebayOBS သို့ NxtNXT32.56 ObscurebayOBS သို့ Ethereum ClassicETC0.0615 ObscurebayOBS သို့ DogecoinDOGE120.46 ObscurebayOBS သို့ ZCashZEC0.00507 ObscurebayOBS သို့ BitsharesBTS12.86 ObscurebayOBS သို့ DigiByteDGB13.36 ObscurebayOBS သို့ RippleXRP1.48 ObscurebayOBS သို့ BitcoinDarkBTCD0.0144 ObscurebayOBS သို့ PeerCoinPPC1.38 ObscurebayOBS သို့ CraigsCoinCRAIG190.2 ObscurebayOBS သို့ BitstakeXBS17.8 ObscurebayOBS သို့ PayCoinXPY7.29 ObscurebayOBS သို့ ProsperCoinPRC52.37 ObscurebayOBS သို့ YbCoinYBC0.000224 ObscurebayOBS သို့ DarkKushDANK133.96 ObscurebayOBS သို့ GiveCoinGIVE904.11 ObscurebayOBS သို့ KoboCoinKOBO95.1 ObscurebayOBS သို့ DarkTokenDT0.384 ObscurebayOBS သို့ CETUS CoinCETI1205.65
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 08:30:02 +0000.